I-Ultracentral LUX 3 entsha
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguSergiu
Ifulethi kwisakhiwo esitsha esinokulungiswa kakuhle.
Le ndlu ikwisakhiwo esitsha esilungiswe kakuhle.
Indlu ibanzi kakhulu, 70m2.
Siqinisekisa ukucoceka kunye nentuthuzelo.
Iindawo zokutyela ezikufuphi, iibhari, amaziko orhwebo, iivenkile ezinkulu, iivenkile, izithuthi zikawonke-wonke.
Le ndlu inkulu, kwaye inomfanekiso osisikwere wama-753 sqft okanye 70m2.
Kwindawo ekufutshane unokufikelela ngokulula kwiindawo zokutyela, iibhari, iivenkile ezinkulu, iivenkile ezinkulu / ivenkile yokutya, kunye nezithuthi zikawonke-wonke.
Umbindi wesixeko. Iimitha ezingama-50 ukusuka kwisitalato esikhulu sesixeko. Iifestile zijonge kwintendelezo, ukuze ungevi ingxolo yesixeko. Ukuba ufuna ukuphumla kwaye ulale ixesha elide le ndawo yeyakho.
Indawo yokuhlala ibekwe kumbindi wesixeko, malunga neemitha ezingama-50 ukusuka kwisitalato esikhulu sesixeko, nangona kunjalo, indawo izolile kwaye ikhuselekile. Iifestile zijonge ngasentendelezweni, ngoko akuyi kuva ingxolo yesixeko. Ukuba ufuna ukuphumla kwaye ulale ixesha elide le ndawo yeyakho kuphela.
Umbuki zindwendwe ngu- Sergiu
Iindwendwe zingaqhakamshelana nam ngefowuni okanye ngeSMS.
Iindwendwe zingaqhakamshelana nam ngefowuni okanye ngeSMS